120D / 2 150D / 2 100% Qalabka Wareejinta Polyester
Naqshadeeynta Nadaafadda Polyester Filament Thread
100% maadada polyester-ka ayaa laga sameeyaa maadada polyester FED, adigoo leh qalabka kala-baxsan ee 125-135ºC, wuxuu leeyahay midabka midabkiisu u fiican yahay iyo iska caabin fiican.
Naqshad shaybaadhka polyester waxaa lagu gartaa awoodda ay u leedahay in ay adkeyso kiimikada iyo inta badan dhar la dhaqo, yaraynta dharka xijaabka iyo midab-jabka. Sidaa darteed, dharka hotel ee badan, iyo sidoo kale qaar ka mid ah joynta buluuga ah, dharka ciyaaraha ama dharka carruurta qaarkood, ayaa laga sameeyey dhogorta birta. . Guud ahaan, maadadaha polyesterku waa adag yihiin waxayna ka xoog badanyihiin naqshad wareega.
Marka mashiinka la duubo, muraayada polyester-ka waxay u adkeysan kartaa awoodda sare ee mashiinka sheyga, taas oo ka dhigi karta mashiinka si dhakhso ah; iyo ka hortag dabka uu aad u sarreeyo, xitaa haddii polyesterku ku dhow yahay ololka, ma fududa in dab qabsado.
Baaxadda Midabka Midabka Resistance Good Ciraaq
High Tenacity Kufsi yar
Waxyaabaha: Waxyaabaha dabiiciga ah ee Polyester
Tirinta: 75d/2, 108d/2, 120d/2, 150d/2, 300d/2, 300d/3, 300d/1,etc
xirxirida: 1800yds iyo 5000yds, ama 0.5kg ilaa 1kg / mug weyn
Color: 1700 midabada kala duwan, sidoo kale midabada iibsadaha waa mid la aqbali karo.
Capacity: 10000 tons / sano
isticmaalka: Sababtoo ah xoojin sare, waxaa si weyn loo isticmaalaa dhar dhaqid, dharka, maqaar, jacquard iyo noocyo kala duwan oo farshaxan iyo qurxin
Description: Qaadashada tayada ugu sarreeya ee maadada polyesterka sida alaabta ceeriin ah, mawduuca miyir-baarista MH-Polester waxaa lagu soo bandhigaa qalab casri ah, awood sare iyo midab adag. Waxay ku haboon tahay safarka xawaaraha sare iyo noocyada kala duwan ee textile
Jeans, kabo, koofiyado, shaqo-gacmeedka iyo dharka shirkadda, dhar-goyska guriga
Denier Tex Cabbiraadaha Tartanka PLY Celceliska Xoog Kordhinta Min-Max Cabbirta Cabbirta Lagu Soo Celiyey
(T) (cN) (g) (%) daanyeer Metric
Muhiimad dheeraad ah oo ku saabsan maadada polyester